Afuganisitani - ALinks
Maitiro ekuwana Jobho Basa muAfghanistan
November 18, 2020 Shubham Sharma Afuganisitani, mabasa
Kune vekunze, Afghanistan ine mhando dzese mikana yemabasa inobhadhara zvakanyatsonaka. Kubata ndekwekuti, hongu, muAfghanistan, uchafanirwa kushanda. Nekuda kwetarisiro yemubhadharo wakanaka wekutambudzika, kune vanhu vazhinji vanoda kuzviita
October 30, 2020 Antika Kumari Afuganisitani, vhiza
April 23, 2020 Shubham Sharma Afuganisitani, vhiza
Afghanistan ndeimwe yekukurumidza kuwana vhiza. Mahofisi mazhinji emamishinari anoburitsa vhiza yevashanyi nefomu rekunyorera rapera, foto yepasipoti, fizi yevisa, uye pepa repasipoti. Vanozviita zvakanyanya pazuva rimwe chetero.
Dzidza kumaYunivhesiti muAfghanistan
April 22, 2020 Antika Kumari Afuganisitani, kudzidza
Iwe unofanirwa kudzidza kuti ndeapi emayunivhesiti akakukodzera kana iwe uchida kudzidza muAfghanistan. Kana zvakadaro, iwe unoda kudzidza kumayunivhesiti muAfghanistan. Ipapo, sarudzo yakakosha kusarudza kwaunodzidza. Tine
Hutano hwehutano muAfghanistan.
April 20, 2020 Antika Kumari Afuganisitani, utano
Makore ehondo yevagari vemo akaparadza hutano hwekuchengetedza hutano uye kusiyana nedzimwe nyika, zvirwere zvakaita semanyoka uye chirwere chekufema chakakwira muAfghanistan. Maererano neThe World Bank, mwana mumwe chete pagumi achafa vasati vasvika
Ndeipi nguva yekuenda kuAfghanistan? Ziva Pano!
April 2, 2020 Karuna Chandna Afuganisitani, famba
Afghanistan irwo rudzi rune mwaka urwo rwakasiyana. Mazuva ezhizha anoshandira madutu guruva. ipo chando chandochinaya-chakavharidzirwa kupfuura nepakati munguva yechando. Kazhinji, yakanyanya kunaka nguva yekuenda kuAfghanistan ndiApril-Chivabvu naGunyana-Gumiguru. Nguva yekukurumidza iri kubva
Uri hunhu hwakawandisa here? Kana hongu, tenga nzvimbo idzi muAfghanisthan !!
February 4, 2020 Karuna Chandna Afuganisitani, zvinhu zvekuita
Afghanistan inopa mushanyi sarudzo yakasarudzika yemabasa emaoko. Makapeti emhando yepamusoro eAfghan, makoti ekarakul, jasi remvere, zvishongo zvakavezwa, nguwani uye machira esirika akarukwa zvine mukurumbira. Zvinhu zvekare zvimwe zvezvinhu zvinoedza vafambi. Michero yeAfghanistan uye nzungu
Pane Rwendo rwekuenda kuAfghanisthan? Unofanira kushanyira nzvimbo idzi Ikoko !! Nzvimbo dzepamusoro dzaunogona muAfganisthan !!
February 3, 2020 Maitri Jha Afuganisitani, zvinhu zvekuita
Iyo indasitiri yekushanya yeAfghanistan yakagadziriswa nerubatsiro rwehurumende mukutanga kwema1970 uye iri kumutsiridza zvishoma nezvishoma mushure memakumi emakore ehondo. Pasipoti inoshanda ine vhiza inodikanwa kuti upinde muAfghanistan. Mamishinari eAfghan anoburitsa pakati pe15,000 ne